December 2017 – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay 15 sanno jir. Waxaan lahaa uur waana joojiyay uurka. Dadka kale ee jooga iskuulka waxay igu dhahaan in aan ahay qof dilaa ah, oona dilay ilmahayga.
Adigu weli ma doonaynin in aad ilmo dhashid.
Waxaadna go’aansatay in aad ilmaha iska soo ridid.
Midaasi waa adiga xaqaaga.
In ilmaha la iska soo rido ma ahan mid lagu noqonayo qof dilaa ah.
Dalka Jarmalka waxaa ka jira xeerar ku saabsan marka aad ilmaha iska soo ridi kartid.
Marka ay banaantahay?
Marka ay reebantahay?
Dadka kale adiga kuma fahmayaan.
Waxaa dhici karta in ay doonayaan in ay oggaadaan sababta aad sidaasi u samaysay
Anigu ma jecli waxa aad sheegaysaan.
Waxa aad sheegaysaan waa hadalo i dhaawacaya.
Sidoo kale waxaad u sharxi kartaa sababta aad sidaasi u samaysay.
Kadib waxaa dhici karta in ay ku fahmaan.
Laakiin adiga khasab kuguma ahan in aad wax walba u sharaxdid.
Posted on December 20, 2017 Author editorialteamCategories Pregnancy - Schwangerschaft
Anigu waxaan ahay gabar 13 sanno jir ah waxaana jeclahay in aan u diro saaxiibkayga dhabta ah sawirkayga oo qaawan. Anigu gebi ahaanba waan qaawanahay. Laakiin qof iskuulka jooga ayaa igu yiri midaasi in ay tahay “filimada xun ama galmada ah ee ilmaha”. Miyaa la igu ciqaabayaa arintaasi?
Maya, adigu lama kulmi doontid wax ciqaab sharci ah.
Maadaama aad tahay ilmo weli ma aadan gaarin da’da “mas’uuliyada dembiga” illaa aad ka gaartid da’da 14.
Da’da 13 sanno jir adigu lagaama ciqaabi doono dhinaca sharciga.
Kaliya waalidiintaada ama dadka mas’uulka kaa ah ayaa kaa celin kara in aad sidaas samaysid.
Si kastaba, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay in aad tixgelisid ama oggaatid.
Tusaale ahaan, saaxiibkaaga waa la ciqaabi karaa
haddii uu asaga yahay mid jira 14 sanno ama ka weyn, maadaam uusan ahayn ilmo.
Mararka qaar sawiradu waxay u yihiin sharci daro sababtoo ah adiga ayaa ah kaliya 13 sanno jir.
Sidaan waxay xaaladu tahay haddii:
Sawirku tusinaayo qof ka yar 14 sanno qofkaasi uu samaynaya galmo.
Sawirku tusinaayo aasaasi ahaan naasaha ama meesha lugaha gudahooda ah
Ayada oo aan la eegaynin da’da, waa sharci daro haddii:
Qof lala hadlo ama lagu khasbo in sawirka laga qaato.
Sawirka noocaan ah waa midka loo diro qof aanan doonaynin.
Sidoo kale waa sharci daro
in loo diro sawirka noocaan ah qof kale ayada oo aan oggolaansho laga haysanin.
Laakiin midaasi mararka qaar way dhacdaa.
Haddii aad u baahantahay in arintan laguugu caawiyo, waxaad qof kala xiriiri kartaa halkan:
Anigu waxaan ahay gabar jirta-14-sanno waxaana maqlay in gabdho kale oo iskuulka dhigta ay sameeyeen tallaalka HPV. Maxay tahay midaasi? Anigana miyaan u baahanahay?
HPV waxaa laga soo gaabiyay “Fayraska Banii’aadamka Ee Papilloma”.
Fayrasyadu waxay keenaan cuduro.
Cudurada uu keeno HPV waxaa kamid ah:
“Kansarka afka-ilmagaleenka” iyo “burooyinka xubinta taranka”.
Kansarka afka-ilmagaleenka waa cudur halis ah oo jirka ku dhaca.
Afka-ilmagaleenka waa qayb kamid ah jirka dumarka midkaas oo ku xira dusha sare ee xubinta taranka.
Burooyinka xubinta taranka waxay u egyihiin sida qanjiro leh midabka buniga ah ama caddaanka.
Mararka qaar burooyinku waa kuwo sameeya cun-cun ama gubasho.
HPV waxaa loogu gudbin karaa dadka kale tooska galmada.
Inbaddan oo kamid ah dumarka iyo nimanka waxaa ku dhaca HPV inta ay noolyihiin.
Laakiin ma ahan mid qofkasta uu fayraska isku bedelo cudur.
“tallaal” ayaa kaa celin kara in aad xanuunsatid ama cudurka uu kugu dhaco.
“tallaalku” waa irbad laguugu duro oo ka hortagta cudurka.
Irbadaan waxay ku caawinaysaa jirkaaga in uu la dagaalamo fayraska.
Waxaan arintaan weydiin kartaa dhakhtarkaaga dumarka.
Waxay kugu caawin kartaa in aad go’aan gaartid.
Waxay kugu samayn kartaa tallaal.
Waxaa wanaagsan in lagu tallaalo kahor inta aadan marka hore samaynin galmo.
Tallaalka lagu daaweeyo HPV waa mid bilaash ama lacag la’aan ah.
Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir ah qoyskaygana waxay doonayaan in ay “gudniin igu sameeyaan”. Anigu waan cabsanayaa. Qoyskaygu ma maqlayaan warkayga. Qofkeen la hadli karaa?
Adiga oo kaliya kuguma koobna arintaan.
Inbaddan oo gabdhaha kamid ahi waxay ka cabsadaan “gudniinka” (sidoo kale loogu yeero “gudniinka gabdhaha” ama “gudniinka xubinka taranka gabdhaha”).
Inbaddan oo gabdhaha kamid ahi ma jecla in gudniin lagu sameeyo.
Inbaddan oo qoysaska kamid ahina ma ogga in gudniinka uu dhibaato u gaysan karo caafimaadka gabadha.
Gudniinku wuxuu ka yahay dalka Jarmalka mid aan sharci ahayn.
Qaar kamid ah gabdhaha way ku adagtahay in ay dad kala hadlaan gudniinka.
Waa kuwo xishooda ama ma garanayaan waxa ay dhahaan.
Kuwo kalena ma helayaan ereyo ku habboon oo ay sheegaan.
Dareemuhu marwalba waa kuwo caadi ah.
Waxaa jira xarumo latalin kuwaas oo kugu caawin kara arintan.
Meelo ay gabdhuhu kula hadli karaan dumar kale oo waaweyn.
Waxay kala hadli karaan cabsidooda, xishoodkooda iyo wixii kale oo dareemo ah.
Dumarka halkaasi jooga ma eedeeyaan gabdhaha ayaga u yimaada.
Ayagu kaliya waxay doonayaan in ay gabdhaha caawiyaan.
Waxaad u sheegi kartaa dumarkaasi waxa aad u baahantahay.
Gudaha Munich, tusaale ahaan, xarunta latalinta waxaa lagu magacaabaa Wüstenrose (PDF 3,3 MB).
Posted on December 20, 2017 December 21, 2017 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah gabadhii saaxiibtayda ahaydna way iga tagtay. Laakiin dhab ahaantii aad ayaan isku jeclayn. Anigu ma aqbali karo kala-tageena. Aad ayay ii dhaawacaysaa. Sidaas darteeda inta baddan waan kadaba galaa iskuulka kadib waxaana isku dayaa in aan dib usoo ceshto. Shalay waxay ii sheegtay in aan la ii oggolayn in aan sidaasi sameeyo. Midaasi sax miyaa?
Haa, waa sax. Adigu laguuma oggola in aad daba raacdid qofna asaga oo aan midaasi raali ka ahayn.
In la kala tago gabar saaxiibtaada ah ama wiil saaxiibkaaga ah marwalba waa mid xanuun baddan.
Xanuunkuna wuxuu noqonayaa mid aad u weyn, haddii aad weli qofkaasi jeceshahay.
Laakiin jeceylku waa mid ku saabsan labbo qofood.
way adagtahay in aad iska fasaxdid saaxiibtaada.
Laakiin adigu ma haysan kartid haddii aysan ayadu midaasi doonaynin.
Xiriirka jacaylka ku dhisan wuxuu wanaagsanyahay marka uu yahay mid si iskaada ah uu qofka uga yimaado.
Midaasna macnaheedu waxay tahay marka labadiinu aad midaasi wada doonaysaan.
Adiguba ma jeclaan lahayn haddii laguugu khasbo jeceylka.
Sidoo kale waa mid lid ku ah sharciga in qof ladaba galo.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in la daba galo qof aanan doonaynin daba galka.
Isku day in aad iska iloowdid oona ku fikirtid waxyaabo kale.
Waxaa jira qaabab baddan oo kugu caawin kara in aad dhaydid qalbiga jabay:
Qof u sheeg arinta.
Dabcan xitaa ooy.
Dheel ciyaar ama samee jimicsi ama waxyaabo kale oo aad jeceshahay in aad samaysid.
Posted on December 20, 2017 Author editorialteamCategories Love - Liebe